ILOOK - မြို့ပေါ်ရှိအင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်တင်သူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » ILOOK: သာလျှင်မြို့မှာရှိတဲ့အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား (OTT) ပေးသူကျော်အဆိုပါ!
OTT ၏အယူအဆဟာနှစ်ပေါင်းတလျှောက်လုံးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုကျွန်တော်တို့ကို ILOOK နှင့်အတူအပြည့်အဝအားသာချက်ယူဘို့စစ်မှန်သော Avenue ရှိပါ! ဤသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် TVapp cable ကိုကျော်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဂြိုဟ်တု နှင့်ဆက်သွယ်ရေးရုပ်မြင်သံကြားပံ့ပိုးပေးသော်လည်း, ကတီဗီကွန်ရက်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများများတွင်မည်သူမဆို ILOOK အပေါ်တစ်ဦးငွေရစေသောတီဗီကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်နိုငျပါသညျ!
ILOOK ချက်ချင်းသင့်မိုဘိုင်းများအတွက် branded ရုပ်သံလိုင်း apps များသို့ YouTube ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်! အဘယ်အရာကိုအလွန်အေးမြင်ယူကျု့ချန်နယ်ပိုင်ရှင်များယခုတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့ကစားခလုတ်တံဆိပ်ခတ်ထားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တီဗီကွန်ယက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပုံ4လွယ်ကူသောခြေလှမ်းသို့သိပ်သည်းနေသည်: 1) သင့် ILOOK အကောင့်2သို့ Log) ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နယူး TVapp Create button ကို 3) သင့် TVapp4တစ်ယူကျု့ချန်နယ်ချိတ်ရန်) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ခလုတ်ကို။ ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်တွေကိုအလိုအလျှောက်မယ့်တီဗီကွန်ယက်ကိုများကဲ့သို့ပြုမူကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်း TVapp ဖန်တီး! * သင့် TVapp အပေါင်းတို့, သင်၏ video င်, အလိုအလျှောက်ပါက TV ကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာဘယ်မှာမိုဘိုင်း app စတိုးဆိုင်များမှတင်သွင်းသည်။ သင်တစ်ဦးက iOS / Android မှာဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ မှတ်စု: အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့, app ကိုစတိုးဆိုင်လုံလောက်သောဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာမဆံ့ဘူးနှင့် / သို့မဟုတ်လုံလောက်စွာဖော်ပြထားကြသည်မဟုတ်ကြောင်း app များကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ TVApp ILOOK သုံးပြီးထုတ်ဝေပြီးနောက်ဒီအစွမ်းထက်ထုတ်ကုန်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုပေးစွမ်း: 1) ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းချိတ်ဆက်ထားသောယူကျု့ချန်နယ်မှဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဖြည့်စွက်ခြင်း, အလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ TVapp2၌ထပြသထားတယ်) တင်ခြင်းဗီဒီယိုများတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူကျု့ချန်နယ်များချိတ်ဆက်များဖြင့်တင်ထားသောနိုင်ပါသည် တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ ILOOK အကောင့် (ထက်တစ် TVapp မှ) ။ တင်ထားသောဗီဒီယိုများစုစည်းများအတွက်ရရှိနိုင်ကြသည်, reverse-စုစည်းနှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက် 3) စုစည်းခြင်းအခြားလူများရဲ့ TVapps သို့သင့်ရဲ့ ILOOK အကောင့်ကနေတင်ပို့ဗီဒီယိုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တစ်ဦး TVapp ပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ 4) Reverse- စုစည်း pay-per-အမြင် (PPV အတွက်), စာရင်းပေးသွင်းမှုများနှင့်တီဗီကြော်ငြာ: ILOOK သုံးငွေရှာခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများထောက်ခံပါတယ် whereas- သင့်ရဲ့ TVapp 5) ငွေရှာခြင်းသို့တင်သွင်းမှု ILOOK ထံမှဗီဒီယိုများ။ ILOOK နေဖြင့်စုဆောင်းငွေရှာခြင်းကိုဝင်ငွေအလိုအလြောကျ TVapp ပိုင်ရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏ Syndication မှပေးပို့နေသည်။ ILOOK တစ် TVapp ရဲ့ PPV အတွက်, ကြေးပေးသွင်းနှင့် e-commerce ကိုဝင်ငွေမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူး။
နောက်ထပ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ် ILOOK ကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်သို့မဟုတ် အသားပေးဗီဒီယိုများ (သို့မဟုတ် FVTVapps သို့ FVs ထည့်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ s) ကိုဟုခေါ်သည် Paid-စုစည်း။ မဆိုဗီဒီယို, မခွဲခြားဘဲအရှည်၏တစ်ဦး FV အဖြစ်သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ FV ရဲ့အလိုအလြောကျရှိသမြှသော TVapps အနှံ့ဖြည့်စွက်ထားပါသည် အသားပေးဗီဒီယိုများ option ကို enabled! FVs တစ် TVapp အားဖြင့် enabled အခါကအနည်းဆုံးဆယ်မိနစ်ပြီးခဲ့သည့် FV ကတည်းကကြာလျှင် * တစ်ခုတည်း FV ဗီဒီယိုတစ်ကားရဲ့အဆုံးမှာဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အဆိုပါ TVapp ရုံကိုအခြားဗီဒီယိုကိုကြိုက်သည် FVs ဆကျဆံ - သူတို့ကိုဆိုင်းငံ့မှုနှင့်ပင်ကျော်သွားခံရဖို့ခွင့်ပြု။ တစ်ဦး FV ယင်း၏မကုန်မီခုန်သောအခါကြော်ငြာရှင်တစ်ဦး Prorated အခြေခံပေါ်မှာငွေကောက်ခံနေသည်။ တစ်ဦး 30 ဒုတိယ FV5စက္ကန့်အကြာတွင်ကျော်သွားလျှင်ဥပမာ, ကြော်ငြာရှင်သာ CPM လေလံပမာဏ၏ 50% တရားစွဲဆိုထားသည်။ ILOOK လည်းပုံမှန်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူထိပ်တန်း Interleave အပေါ်အမြင့်ဆုံး CPM လေလံ FV နှင့်အတူ CPM လေလံပမာဏကိုကျဆင်း၏နိုင်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်အတွက် FV စာရင်းများဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရရှိနိုင် FVs လုပ်နိုင်သောအခြေအနေတွင်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထား, စာရင်းဝင်နေကြသည်။ ကစားတိုင်း FV သမိုင်း logged in ဝင်သောနှင့်နောက်ပိုင်းအချိန်တွင်အကွိမျကွိနိုင်ပါသည်။ (ဖြစ်နိုင်သည် "အခုဝယ်ပါ" လင့်များနှင့်အတူ) တစ်ခု FV နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို ChannelApp ၏အင်ဖို pane ထဲကကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါအသံလွှင့်ကွန်ရက်တစ်ခုရှုခင်းလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် OTT အသက်အရွယ်မှလာမယ့်အတူ ILOOK ဖို့ထက်ကိုကြည့်ရှုရန်မပိုကောင်းရာအရပျရှိပါ! ဒီအံ့သြစရာကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက:www.ilook.tv/
အောင်မြင်မှုများနည်းပညာများပေါ်တွင်မိနစ်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်ဖွင့်အားလုံးအတှကျ, အသိနေရန်သေချာစေပါ ?? အသံလွှင့်အတူမဂ္ဂဇင်း Beat!
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ အသားပေး 2014-09-26
ယခင်: အသက်ရတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားယူခဲ့ Vinten နှင့် Vizrt
နောက်တစ်ခု: ol '' Blackmagic Pickathon ကြောင်း